पुग्दो छ त अक्सिजन ? « Image Khabar
पुग्दो छ त अक्सिजन ?
Imagekhabar २० श्रावण २०७८, बुधबार ०६:४३
काठमाडौं । कोरोना महामारीको दस्रो लहरमा अक्सिजनको चरम अभाव झेल्नुपर्यो । धेरै बिरामीले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाए । व्यक्ति – व्यक्तिदेखि राज्यका विभिन्न निकायसम्म अक्सिजनको जोहो गर्न लागिपरे । मुलुकभर फेरि बिस्तारै महामारीको तेस्रो लहरकोे जोखिम देखिँदै छ । के अब तेस्रो लहर आइहाले त्यसलाई थेग्न सक्ने अक्सिजन व्यवस्थापन हुन्छ त ?
कतिपय प्रदेश यसमा तयार छन् । केही सुस्त देखिन्छन् । केहीमा कामै भएको छैन । प्रदेश १ का अस्पतालहरुमा धमाधम अक्सिजन प्लान्ट निमार्ण भइरहेको छ। ६ जिल्लाका अस्पतालमा प्लान्ट निमार्ण गरी अक्सिजन उत्सादन सुरु भइसकेको प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अन्य आठ जिल्ला अस्पतालमा प्लान्ट निमार्ण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सूचना अधिकारी षणानन्द भट्टराईका अनुसार झापाको मेची अस्पतालसहित पाँचथर, भोजपुर, संखुवासभा, उदयपुर र धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन सुरु भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक अस्पताललाई १ करोड ५० लाखका दरले बजेट छुट्याएको थियो । संघीय सरकारका तर्फबाट पनि अस्पतालहरुमा धमाधम प्लान्ट निमार्ण भइरहेको भट्टराई बताउँछन् ।
डब्लुएचओको नयाँ निर्देशिका : हावाको गुणस्तर सुधार्नै पर्ने दबाबमा नेपाल
६ वर्षपछि बढेको रासनभत्ता पनि पाएनन् सुरक्षाकर्मीले
काठमाडौं प्रहरीको चाडबाड सुरक्षा योजना, घर छाड्ने भए प्रहरीलाई खबर गर्नुस्